filename.xls 'Lama Heli Karo
Bogga ugu weyn > Products > DataNumen Excel Repair > filename.xls 'Lama Heli Karo.
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan "filename.xls 'Lama Heli Karo" Khalad
Markaad furanayso faylka 'Excel XLS' ama 'XLSX' ee waxyeello gaadhay ama loo yaqaan 'Microsoft Excel', waxaad arkaysaa farriinta qaladka ah ee soo socda:
'filename.xls' lama heli karo. Faylka waxaa laga yaabaa in la akhriyi karo oo keliya, ama waxaad iskudayeysaa inaad marin u hesho meel-akhris oo keliya. Ama, serverka dukumiintiga ku keydsan ayaa laga yaabaa inuusan ka jawaabin.
meesha 'filename.xls' uu yahay magaca faylka 'Excel' ee musuqmaasuqa ah.
Marka faylka Excel XLS ama XLSX uu kharribmo oo Microsoft Excel aysan aqoonsan karin, Excel ayaa laga yaabaa inay soo sheegto qaladkan. Macluumaadka khaladka ayaa marin habaabinaya maaddaama ay tiraahdo feylka lama heli karo maxaa yeelay waa la akhrin karaa oo keliya. Si kastaba ha noqotee, xitaa faylka dhabta ah MA aqrin-kaliya, haddii uu musuqmaasuq yahay, Excel wali qaladkan ayuu ku soo sheegi doonaa qalad.
Waxaad marka hore hubin kartaa haddii feylku yahay mid la aqrin karo oo keliya, goobta akhriska keliya laga akhriyi karo, ama server-ka fog. Haddii feylku ku yaal meel keliya oo la akhriyi karo ama server-ka fog, ka dibna isku day inaad ka nuqulto feylka goobta ama server-ka la aqrin karo oo keliya oo aad ku qori karto kombiyuutarka deegaanka. Hubso inaad ka saarto astaamaha kaliya ee akhriya feylka 'Excel'.
Haddii feylka Excel wali aan la furi karin, markaa waxaan xaqiijin karnaa faylka inuu musuqmaasuq yahay. Waxaad marka hore isticmaali kartaa Shaqada dayactirka ee Excel si loo hagaajiyo faylka Excel ee musuqmaasuqa ah. Haddii taasi shaqeyn weydo, markaa kaliya DataNumen Excel Repair ayaa ku caawin kara.
Muunad fayl XLS musuqmaasuq ah oo sababi doona qaladka. Cillad5.xls
Faylka waxaa soo ceshaday DataNumen Excel Repair: Cillad5_fixed.xls